Oracle inorasikirwa pasi kuvhura-sosi dhatabhesi | Linux Vakapindwa muropa
Giant Oracle yakagumburwa pane yakavhurika sosi dhatabhesi uye iri kuzivisa kurasikirwa kwemubhadharo nekuda kwekupedzisira. Munguva yakapfuura, Oracle yakagadzira dhatabhesi hombe iyo yaitonga pamusika, asi nekubuda kweakavhurika sosi dhatabhesi, vazhinji vakasarudza kuishandisa uye bhizinesi rawa.
Munguva pfupi yapfuura, dhatabhesi zvine hukama (SQL-based) uye isiri yehukama (NoSQL) Ivo vabuda zvine simba uye kune akawanda akanaka kwazvo dzimwe nzira kune zvigadzirwa zveOracle. Aya mamwe madhatabhesi anoshanda nemazvo uye haabhadhare chero chinhu, pane kiyi iyo ivo vasingade kuenda kuOracle.
Oracle yaive nepedyo monopoly mumunda wedhatabhesi, asi ikozvino haichakwanise kana kukwikwidzana nemamwe mapurojekiti emahara. Oracle inofanirwa kumutsiridza nekufungisisa bhizinesi re database kana richida kuenderera mubhizinesi, zvikasadaro rinotambura zvakanyanya nekuwedzera pamwe neakavhurika sosi mapurojekiti ari kutora pamusika. Saka Oracle inongoda kufungidzira kuti: Iyo ramangwana rakavhurika-sosi!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Oracle inogumburwa pamusoro yakavhurika sosi dhatabhesi
Na Mwari, ndeapi mashoko? Kana kutaura chinhu chitsva. Kana kupa data (huwandu hwokurasikirwa? Chirevo?). Iko hakuna sosi. Iko mashanga epfungwa enhau nekuda kwaMwari.
Ini ndinofunga mutsetse wekupedzisira wechinyorwa ichi wainyatso kujeka "Tendeuka uone chii" B)
Ichokwadi, sosi yekusimbisa iyo data yaisazove yakaipa zvachose.
Uye chii chingave ichi dhatabhesi chichava? Nhau dzakaipa, sosi yakaipa uye hapana nhamba